Udi | တစ်ဦးကရထား Save
စာရေးသူ: Udi အဘိဓါန်ခန္ဓာကိုယ်
နေအိမ် > Udi အဘိဓါန်ခန္ဓာကိုယ်
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဆွစ်ဇာလန်ရထားဘော်စတွန် Consulting Group ၏အဆိုအရဥရောပအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဆွစ်အရည်အသွေးကိုကျဆင်းနေသော်လည်းမြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အောင်မြင်. ဆွစ်တစ်အောင်မြင် 7.2 ထဲကခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 10. ဒိန်းမတ်နေတုန်း, ဖင်လန်, ဂျာမနီနှင့်အားလုံးတစ်ဦးရရှိ 6+ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်. အကြား…